PressReader - Ilanga: 2018-07-12 - ISONGELA ABANGAHAMBISANI NOTHWELWE NGEQOMA INTSHA KAKHONGOLOSE
ISONGELA ABANGAHAMBISANI NOTHWELWE NGEQOMA INTSHA KAKHONGOLOSE
Ilanga - 2018-07-12 - Izindaba - ANDILE MOSHOESHOE editor@ilanganews.co.za
ISONGELA “amahlongandlebe” ayo i-ANCYL esifundeni iHarry Gwala, ithi izobhekana ngqo nawo uma engahambisani nesinqumo sayo sokweseka unobhala walolu phiko lwentsha lweANC KwaZulu-Natal, uMnu Thanduxolo Sabelo, engqungqutheleni yokukhetha ubuholi ngoMandulo (September). UNobhala we-ANCYL eHarry Gwala, uMnu Qiniso Mnguni, uveze lokhu engxoxweni ekhethekile neLANGA.
Ukhuluma kanjena nje, uNhlangulana (June) uphele noMnu Ntando Maduna obekhulumela lolu phiko eHarry Gwala esolwa ngokungathembeki. Uzwakalise uvo lwakhe ezinkundleni zokuxhumana eseka uMgcinimafa we-ANCYL, uMnu Reggie Nkabinde ekubeni athathe esokuba ngumengameli walolu phiko, okuyisikhundla esigaqelwe nguMnu Sabelo.
Benza lokhu nje, iHarry Gwala ibisimemezele ukuthi ifuna uMnu Sabelo athathe kwesokwengamela, kwazise uMnu Collen Maine osiphethe, iminyaka kayisamvumeli. UMnu Mnguni uthi bazi kahle ukuthi bakhona abanemibono efana nekaMnu Maduna, kodwa bona bayasihlonipha isinqumo sesifunda sokwesekela uMnu Sabelo njengoba bengakaze baphumele obala ngemizwa yabo.
Ufunge wagomela wathi uzobhekana nabazoqhamuka sebekhuluma enye into ngoba sekuqediwe ngalolu daba njengoba amagatsha awu-61 kwawu63 esifundeni sakhe, ekhuluma ngazwilinye ngokweseka uMnu Sabelo.
“Lokhu esikwenze kuMnu Maduna, kuyisibonelo sokuba amalungu ethu kufanele azi ukuthi kubaluleke kanjani ukuthobela izinqumo ezithathwayo enhlanganweni,” kusho uMnu Mnguni. Uthi beseka uMnu Sabelo ngoba bakholwa wukuthi uzokwazi ukuqeda uqhekeko olukhona kwi-ANCYL. Uphikile ukuthi ukuxosha kwabo uMnu Maduna kuveza lona uqhekeko, wathi bebengasamethembi.
“Isinqumo sokweseka uMnu Sabelo sisithathe naye futhi akazange aphikise ngoba ubenalo lelo lungelo futhi besizomlalela, kodwa usuke lapho wayobhala ezinkundleni zokuxhumana,” kusho uMnu Mnguni. Imizamo yokuxhumana noMnu Maduna iphunzile njengoba izingcingo zakhe bezingangeni.Nokho ilungu lesigungu sesikhashana sesifunda, uNkz Sindi Msomi, lithe kuyilungelo lophiko lwabo ukuzithathela izinqumo futhi ngeke baphikisane nalo.
I-ANCYL esifundeni iHarry Gwala ifuna ukuba kwesekwe uMnu Thanduxolo Sabelo engqungqutheleni yokukhetha ubuholi ngoMandulo (September).